छोरीलाई ज्वाइँको हातमा सुम्पिएर म’र्ने धोको आ’इसुबाटै पुरा गरेर अस्ताए परशुराम – Khabar Silo
शान्ता र सुवास क्यान्स’र रो’गको उपचार गराइरहेका बुवाको आर्शिवाद लिन अस्पतालको आइसीयू पुगे
भरतपुरस्थित सेन्ट्रल अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयूमा) फागुन ११ गते मार्मिक दृश्य देखियो ।नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका वडा नं. १ का क्या’न्सरपीडि’त परशुराम भट्टराईले आफ्नी कान्छी छोरी शान्ता भट्टराईलाई आई’सीयूबाटै विवाहको टीका लगाइदिए । छोरी शान्ता र ज्वाइँ सुवास न्यौपानेलाई उनले आ’ईसीयूबाटै आर्शिवाद दिए ।
नारायणगढको हरिहर मन्दिरमा विवाह सकेपछि शान्ता र सुवास क्यान्स’र रोगको उपचार गराइरहेका बुवाको आर्शिवाद लिन अस्पतालको आ’इसीयू पुगेका थिए ।
छोरीज्वाइँलाई आ’ईसीयूभित्र देख्नेवित्तिकै सकीनसकी परशुरामले दुईहात जोडेर नमस्कार गरे । केही मुस्कुराउने प्रयास गरे ।जिब्रोमा क्या’न्सर भएकाले उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । दुनोमा ल्याइएको टीका पालैपालो लगाएर छोरीज्वाइँलाई आर्शिवाद दिए ।
बुबाको हातबाट टीका लगाएर आर्शिवाद लिएपछि बुबालाई सञ्चो हुन्छ भन्दै ढाढस दिए, छोरीज्वाइँले । ‘बुवा नआत्तिनुस्, हजुरलाई ठीक हुन्छ, पर्सि फर्किएर छिट्टै भेट्न आउँछौं’ भन्दै छोरीज्वाइँले गरेको वाचा पूरा हुन पाएन । छोरीज्वाईलाई विदाई गरेकोे झण्डै १७ घण्टापछि परशुरामले प्रा’ण त्या’गे ।
विगत दुई बर्षदेखि जिव्रोको क्या’न्सरबाट पी’डित बनेका ६० बषर्ीय परर्शुरामका एक छोरा र तीन छोरी छन् । तीमध्ये कान्छी छोरी हुन् शान्ता । कान्छी छोरीलाई ज्वाइँको हातमा सुम्पिएर म’र्ने धोको थियो उनको ।
छोरीज्वाइँलाई टीका लगाएर आर्शिवाद दिएको भोलिपल्टै भट्टराईलाई छातीको दायाँ भागबाट निमो’निया फैलिएको डा. सिग्देलले बताए । ‘निमो’निया यति छिटो फैलियो कि बचाउन सकिएन, १२ गते राति झण्डै १२ बजे उहाँको नि’धन भयो’ डा. सिग्देलले भने । यो समाचार अनलाइनखबरमा छ ।
Posted on June 6, 2020 Author khabar silo
काठमाडौ । लामो समयदेखि चलिरहेको विवादलाई सहजीकरण गर्न दुइ छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबीच आज वार्तामा वस्ने भएका छन् । लद्दाखमा भइरहेको सीमा विवादबारे चीन र भारतबीच आज वार्ता हुँदैछ। दुई देशका लेफ्टिनेन्ट जनरलबीच लद्दाखमै वार्ता हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । विगत एक महिनादेखि लद्दाखको गलवान घाँटी क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच झडप हुँदै […]
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन र विमानस्थल बन्दले भिसा सकिएर स्वदेश फर्कने तयारी गरेका नेपाली पनि प्रभावित बनेका छन् ।ईपीएस रोजगार प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया पुगेका नेपाली कामदार भिसा सकिएपछि स्वदेश फर्कन नपाउँदा अलपत्र परेका छन् ।दक्षिण कोरियामा भिसा सकिएर नेपाल फर्किन नपाएका ३५ सयभन्दा बढी कामदार रहेको ईपीएस प्रणालीबाट ५ वर्षअघि त्यहाँ […]
Posted on May 10, 2020 Author khabar silo
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज फागुन १८ गते आइतबारको रा’शिफल !